Izinhlobo unyathela amabhuleki ku Electric skateboard - Jomo Technology Co., Ltd
Izinhlobo unyathela amabhuleki ku Electric skateboard
Kunoma zemoto kagesi, zikhona eziningana izinhlobo eyinhloko braking- ashukumisayo, friction, nokuhlale unyathela amabhuleki, okuzivuselela. Bonke ukusebenzisa izindlela ezahlukene okwehlisa imoto phansi.
Friction amabhuleki kukhona uhlobo olufanayo amabhuleki ukuthi ezisetshenziswa izimoto ezivamile. Ngokuyisisekelo, ngomshikisho ngokumelene disc ukubopha isetshenziselwa ukuguqula energy kinetic (ukujikeleza imoto) ku ukushisa, okuyinto siyehla imoto phansi. A ibhayisikili emgwaqweni njalo futhi isebenzisa ngomshikisho ukubambezela ngu clamping iphedi ukubopha ngokumelene usebe engaphakathi isondo libhayisikili sika.
skateboard Electric ngokuvamile ungasebenzisi ngomshikisho amabhuleki ngoba idinga besiyoba sikhulu hardware mechanical ukuthi othwala phandle.
Outrunner brushless motors- owande kakhulu motor esetshenziswa ku kagesi skateboard-empeleni iqoqo odonsa unomphela emhlabeni core zethusi wire isilonda emibuthanweni ukuze lapho kagesi eliqhutshwa ngokusebenzisa wire, kwakha kazibuthe odlulela ku isethi odonsa unomphela, okubangela motor ukujikisa. I izintambo coiled wenze electromagnet. Into cool mayelana odonsa wukuthi umphumela obuhlukile ongazijwayele kungaba isilingo occur- uma uphendukisa iringi kazibuthe emhlabeni wire lethusi lona wethula kagesi in the izintambo. Lona oyinhloko eyisisekelo kokubili onamandla futhi okuzivuselela ukubopha izinhlelo, futhi kanjani ugesi ugesi.
unyathela amabhuleki Dynamic uhlelo ngokuvamile esetshenziswa amakhanda isitimela. Kulesi simiso, amandla kinetic iguqulwe ibe ukushisa ngokudlulisela ugesi eyenziwe motors ukuphotha ibe Resistor, okuyinto ke dissipates amandla njengoba ukushisa. Lapho odonsa e motor ephumelela ukwenza samanje izintambo zethusi, ukumelana ekhiqizwa, ekunqandeni ukuphotha motor.
Kusukela namuhla, kukhona omunye skateboard kagesi esebenzisa unyathela amabhuleki ashukumisayo ngokuhlanganyela unyathela amabhuleki okuzivuselela.
skateboard Electric ngokuyinhloko ukusebenzisa uhlelo ngokuthi "unyathela amabhuleki okuzivuselela". Lokhu kufana unyathela amabhuleki ashukumisayo, ngaphandle esikhundleni kabusha ugesi ibe Resistor ukuba ukudamba amandla njengoba ukushisa, ukuthi kabusha emuva ku ibhethri, sokuzivuselela ke.
Udaba samabanga aphansi esinezingane izinhlelo okuzivuselela ukuthi uma ibhethri igcwele, ngeke samukele noma iyiphi yamanje ngaphandle ngokweqile futhi wabhubhisa ibhethri. Ngenxa yalokhu, amabhodi ukuthi ukusebenzisa unyathela amabhuleki okuzivuselela empeleni ulahlekelwe ikhono ukubopha ngemva ibhethri hits 100% kwemali.
Amabhodi efana IBhodi Koowheel noma iBhodi ngomfutho ngeke Beep ngaphambi nje kokuba amabhuleki ukuphuma, kodwa ngokuvamile lokhu akwanele ukuba abangele nabagibeli ongenalwazi ngeka off ebhodini. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi njalo wazi indlela ngezinyawo ukubopha kuwo wonke isivinini ugibele skateboard sakho sikagesi ngaleso. Inzuzo enkulu ne Mellow Drive ukuthi isebenzisa kokubili braking- okuzivuselela futhi ashukumisayo kanye ibhethri igcwele (nalapho amabhuleki kwelinye ipulangwe BakaJehova bangakujabulela ukuphuma ngokuphelele), ke sekuqalile ukuba unyathela amabhuleki ashukumisayo futhi namanje ikuvumela sokuhudula izinyawo lesi.
isikhathi Iposi: Dec-14-2017